Nhau - 2021 yekuuchika kwehuku, musiyano mukuru hausi iwo musika, asi fudza ……
Kuberekana kwehuku kwe2021, musiyano mukuru hausi iwo musika, asi fudza ……
Muchokwadi, iko zvino musika wehuku kupora kunogona zvakare kuverenga. Mutengo wezvigadzirwa zvehuku zvakawanda wasvika padanho renguva imwechete mumakore apfuura, mamwe anga ari pamusoro kunyangwe kupfuura mutengo wepakati mumakore apfuura. Asi kunyangwe zvakadaro, vanhu vazhinji havasati vakurudzirwa kuberekesa, imhaka yekuti mutengo wechikafu wakakwira zvakanyanya gore rino.
Berekesa nyama yemakushe huku semuenzaniso, ona mutengo wehuku yehuku chete, izvozvi zvakapetwa kanomwe, kuva wakanaka. Kana ikaiswa mumakore apfuura, uyu mutengo wemurimi purofiti unonyanya kukosha. Asi gore rino, nekuda kwemitengo yakakwira yekudya, mutengo wekusimudza kirogiramu yehuku wasvika pa4 yuan.
Zvinoenderana nedata rezviverengero, ikozvino 4.2 yuan nezve jini rehuku yehuku, inenge yakafanana nemutengo, mubairo wepasi wakadzikira kwazvo, mwero wekupona hauna kuvimbiswa, uye kunyangwe kurasikirwa kudiki.
Naizvozvo, gore rinouya rekuchengeta huku, yakawanda sei purofiti, zvikuru zvinoenderana nemafambiro emafuro mitengo. Musika wehuku ungangoita mushe kana pasina zvekushamisika, asi mitengo yezvikafu yakasiyana.
Kuti tiongorore mwaka unotevera wekudya wemutengo, isu tinofanirwa kutanga nezvakakosha zvinhu zvakakonzera kukwirisa mumitengo yezvikafu. Vanhu vazhinji vanoziva kuti chakanangana nekukwira kwemutengo wegore rino wekuwedzera mutengo ndeyekukwira kwemitengo yezvikafu zvekudya senge chibage uye chikafu chesoya, asi ndicho chimwe chete chezvikonzero.
Muchokwadi, chibage chegore rino kukohwewa kukuru, chibage chenyika chakakwirira kudarika gore rapfuura. Asi sei mitengo yakakwira apo goho rechibage rakanga rakawandisa? Pane zvikonzero zvitatu.
Kutanga, kupinzwa kwechibage kwakakanganiswa. Nekuda kwedenda iri, bhizimusi rese rekutenga nekutengesa kunze kwenyika rakakanganiswa gore rino, uye chibage hachina kusiyana. Nekuda kweizvozvo, huwandu hwese hwechibage hwakamira padiki pamberi pechirimwa chitsva chegore rino.
Chechipiri, mugore rapfuura, kugadzirwa kwedu kwenguruve kwakapora chaizvo, saka kudiwa kwechikafu zvakare kwakanyanya. Izvi zvakasimudzira chibage, soya uye kumwe kugadzirwa kwekudya mbishi zvinhu zvakasvibira kukwira.
Yechitatu ndeyekuchengetera kwekunyepedzera. Mukufungidzira kwekukwira kwemitengo yechibage, vatengesi vazhinji vari kuunganidza chibage uye vakamirira kuti mitengo ikwire zvakatokwira, pasina mubvunzo vachigadzira mitengo.
Pamusoro pane wegore rino wekudya chikafu, mutengo wechibage unokwira mashoma akakosha zvinhu. Asi kutaura zvazviri, mitengo yezvikafu iri kukwira kwete chete nekuda kwekukanganisa kwekukwira kwemitengo yezviyo, asiwo chikonzero chakakosha kwazvo, ndiko "kurambidza kuramba".